ဇွန်ဘီတွေပြည့်နှက်နေတဲ့လောကကြီးမှာ ခံစားမှုရသမျိုးစုံကိုပေးစွမ်းမယ့် State Of Decay 2
28 Feb 2018 . 12:31 PM
ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေမှာ တစ်ကိုယ်တော်စွန့်စားခန်းထွက်တဲ့ဂိမ်းမျိုးတွေ၊ အက်ရှင်အပစ်အခတ်ဂိမ်းတွေ၊ သမိုင်းတစ်လျှောက်စစ်ပွဲတွေအပြင် ရင်ထိတ်သည်းဖိုဆော့ကစားရတဲ့ဂိမ်းတွေဟာ ဂိမ်မာတွေကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ဂိမ်းတွေပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ဂိမ်းကုမ္ပဏီအများစုဟာ အဲဒီလိုတမူထူးတဲ့ဂိမ်းရသတွေပေးစွမ်းနိုင်မယ့်ဂိမ်းကောင်းတွေကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြီး ပေါ်မြောက်အောင်မြင်သွားကြတဲ့အခါ မူရင်းခွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဂိမ်းပေါင်းများစွာကို ခုနှစ်တွေအလိုက်ထုတ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဂိမ်မာတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုကို အများဆုံးရယူထားတဲ့ဂိမ်းတွေထဲမှာ ဇွန်ဘီအမျိုးအစားဂိမ်းတွေဟာလည်း အပါအဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးငြင်းမရတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ ဂိမ်မာတွေအားလုံးရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာစွဲကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့ CAPCOM ရဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ထုတ် Resident Evil 4, ဒါမှမဟုတ်ရင် Valve Corporation ကထုတ်တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က Left4Dead တို့ဟာ အကောင်းဆုံးသက်သေတွေပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ဇွန်ဘီတွေပြည့်နှက်နေတဲ့လောကထဲမှာအသက်ရှင်ရုန်းကန်ရတာကို ဂိမ်မာတွေ ဘာကြောင့်ကြိုက်ကြတာလဲ? အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်၊ ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ လူသားစားဖုတ်ကောင်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့လောကကြီးကို လေ့လာချင်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သလို အဆမတန်များပြားလှတဲ့ဇွန်ဘီတွေကို တစ်ကောင်မကျန်အမြစ်ဖြတ်ချင်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လုံးဝသေချာတာတစ်ခုကတော့ တကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝထဲ ဇွန်ဘီတွေပေါက်ဖွားလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့အသက်ရှင်သန်မလဲဆိုတာကို လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းလူသားအားလုံးဇွန်ဘီတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ရရာလက်နက်ကိုင်စွဲပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေရုံနဲ့ ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ကယ်တင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အသက်တည်မြဲဖို့အတွက် ပါးနပ်ရမယ်၊ ခိုလှုံမယ့်နေရာကိုရှာဖွေတတ်ရမယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့စည်းလုံးရမယ်၊ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကို စုဆောင်းထားရမယ်၊ အဲဒီလိုမျိုးခြေလှမ်းတိုင်းကိုသတိနဲ့လှမ်းမှသာ တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာအသက်ရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေကိုခံစားရဖို့အတွက် ဇွန်ဘီတွေကိုဒီကမ္ဘာကြီးရောက်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေစရာမလိုပါဘူး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Undead Labs ရဲ့State Of Decay ဇွန်ဘီဂိမ်းကိုဆော့ကြည့်လိုက်ပါ။ ယုတ္တိအတန်ဆုံးဂိမ်းတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ဇွန်ဘီလောကထဲမှာအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကို ဂိမ်းတစ်ခုတည်းမှာစုပေါင်းပေးထားတဲ့ ဇွန်ဘီဂိမ်းကောင်းလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် State Of Decay ဂိမ်းဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဂိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ နှစ်ကတည်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ State Of Decay ဂိမ်းပရိသတ်များဟာ နောက်ထပ်တစ်ခွေဘယ်အချိန်မှာထွက်ရှိမလဲဆိုပြီး စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ Microsoft Studios ဟာလည်း ၂၀၁၆ နဲ့ ၂၀၁၇ E3 ပွဲနှစ်ပွဲမှာ State Of Decay ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခွေထွေလာနဲ့အတူ ထွက်ရှိမယ့်အချိန်ကိုအရိပ်အမြွုက်ချပြနေခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၂၀၁၈ ကိုတောင်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Undead Labs ရဲ့ State Of Decay2ပရောဂျက်ဟာအဆုံးသတ်ပြီးစီးနေပြီလို့ သိရပြီး ၂၀၁၈ မှာထွက်ရှိမယ်ဆိုတာ သေချာနေပါပြီ။ ဒီတော့ ၂၀၁၃ ကတည်းကနေအခုချိန်ထိ အားလုံးနဲ့ကွဲထွက်တဲ့ ဇွန်ဘီဂိမ်းကောင်းတစ်ခုလို့ ဂိမ်မာတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ State Of Decay2မှာ ဘာတွေကိုမျှော်လင့်လို့ရမလဲ? ဘယ်လိုအရာတွေပါမလဲ? ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေထည့်သွင်းထားမလဲ? သိရသမျှအချက်အလက်တွေကို ဂိမ်မာများအားလုံးသိစေဖို့ ဒီကနေပြန်လည်မျှဝေသွားပါ့မယ်။
ပထမ State Of Decay အခွေကို ထရန်ဘူး (Trumbull) လို့အမည်ရတဲ့ တောင်ပေါ်မြေပြန့်မြို့လေးမှာဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေသဖြစ်တဲ့အလျောက် ခြောက်သွေ့တဲ့အပူပိုင်းရာသီဥတုရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်မှာ လယ်ကွင်းပြင်ကျယ်တွေ၊ တောင်ပတ်လမ်းတွေနဲ့ အဝေးပြေးလမ်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ လူတွေနေထိုင်တဲ့နေရပ်ဟာလည်း တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ အနည်းငယ်ကွာဝေးတာကြောင့် ဒီထရန်ဘူးမြို့လေးကို ကျေးလက်အသွင်ဆောင်တဲ့မြို့လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်တစ်ခွေဖြစ်တဲ့ State Of Decay2မှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့မြို့ဟာ အရင်ခွေရဲ့ထရန်ဘူးမြို့ထက် ဆပေါင်းများစွာပိုမိုကြီးမားပြီး ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းတဲ့အပြင် ထရန်ဘူးမြို့နဲ့ကွဲပြားခြားနားစွာပဲ သာယာစိုပြေတဲ့ရာသီဥတုနဲ့အတူ စိမ်းလန်းတဲ့သဘာဝရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ E3 ပွဲမှာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ပြသခဲ့တဲ့ State Of Decay2ထွေလာမှာ အရင်ခွေနဲ့မတူဘဲ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကို အသားပေးထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
လက်တွေ့ဘဝကိုထင်ဟပ်တဲ့ ခံစားချက်ရသမျိုးစုံနဲ့ ဒရာမာအချိုးအကွေ့
State Of Decay အခွေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ စစဦးဆုံးထွက်ရှိလာတုန်းက အဲဒီဂိမ်းကိုရိုးအီပြီးအပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ သာမန်ဇွန်ဘီဂီမ်းလို့ ထင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အစကအဲလိုထင်မှတ်ခဲ့ပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဆော့ကစားသူတွေတိုးပွားလာပြီး တစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက် ကောင်းသတင်းတွေ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြလို့ State Of Decay ဂိမ်းဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဇွန်ဘီဂိမ်းဆိုတဲ့ နေရာကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ State Of Decay ဂိမ်းဟာ သီးသန့်ကြီးဖန်တီးထားတဲ့အကြောက်တရားကိုပေးစွမ်းတဲ့ တခြား survival ဇွန်ဘီဂိမ်းတွေနဲ့မတူဘဲ တမူထူးခြားကွဲထွက်နေတာဟာ လက်တွေ့ဘဝနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ ခံစားချက်ရသတွေကို ဂိမ်းဇာတ်လမ်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီမှာ သဘာဝကျကျထည့်သွင်းထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲကအတိုင်း ဇွန်ဘီအကိုက်ခံရတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာဇွန်ဘီအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့အသက်ကိုစတေးပြီး ဇာတ်ကိုရှေ့ဆက်မယ့်လုပ်ရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ရမယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ ခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအဖော်တွေအတွက် အဲဒီဇာတ်ကောင်တွေချန်ရစ်ခဲ့မယ့်အမှတ်တရတွေ၊ နောက်ဆုံးသေတမ်းစာတွေ အစရှိတာတွေ ရင်နင့်ဖွယ်အတိုင်းသားကြုံတွေ့ရမယ့်အပြင် ဂိမ်းတွင်းဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ဟာ အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီး အသက်ဆုံးရှုံးသွားတိုင်းမှာ ဂိမ်းထဲကိုပြန်လည်ပြီးရောက်ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်အပါအဝင် အခြားဘယ်ဇာတ်ကောင်မဆို အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် သေဆုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာထာဝရဖြစ်ပါတယ်။
State Of Decay ဂိမ်းဟာ တကယ်တမ်း လူတွေနေထိုင်ရာကမ္ဘာမှာ ဇွန်ဘီတွေအပြည့်ဖြစ်သွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်အောင်နေမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကို ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလို ရှာဖွေရတဲ့ဂိမ်းဖြစ်တဲ့အလျောက် သူ့ရဲ့ဂိမ်းကစားဟန်ဟာလည်း သဘာဝကျပါတယ်။ ဂိမ်းအတွင်းမှာပုံမှန်ဇွန်ဘီတွေအပြင် အရွယ်အစားအဆမတန်ကြီးထွားပြီးအားကြီးတဲ့ Juggernaut, အဆိပ်ငွေ့တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသိုလှောင်ထားတဲ့ Bloater, သားရဲတစ်ကောင်လိုလျင်မြန်တဲ့ Feral နဲ့ ကျယ်လောင်စူးရှတဲ့အော်သံနဲ့ အခြားဇွန်ဘီတွေကိုအော်ခေါ်တဲ့ Screamer ဆိုပြီး သာမန်မဟုတ်တဲ့ အသွင်ကွဲဇွန်ဘီလေးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီအသွင်ကွဲဇွန်ဘီတစ်မျိုးချင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိတဲ့အတွက် ကွဲပြားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးချပြီး သူတို့ကိုပါးပါးနပ်နပ်နှိမ်နင်းရမှာပါ။ State Of Decay ဂိမ်းရဲ့အခရာကျတဲ့ဂိမ်းတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာ ကိုယ်ခိုလှုံရာနေရပ်ကိုပိုပြီးအင်အားတောင့်တင်းလာအောင် တည်ဆောက်မှုတွေ၊ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုကူညီပြီး မိတ်ဖွဲ့တာတွေ၊ ဇွန်ဘီတွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေရပ်ကို အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူကာကွယ်တာတွေ အစရှိတာတွေနဲ့အပြင် တကယ့်လူ့သဘာဝဖြစ်တဲ့ အိပ်စက်အနားယူချိန်၊ အစာစားသောက်ချိန်နဲ့ နာမကျန်းဖြစ်ချိန်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ချင်းမှာ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေရှိပြီး ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေ၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပါ အသေးစိတ်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် ဘယ်လိုဆော့ဟန်မျိုးနဲ့ ဘယ်လိုဇာတ်ကောင်ကိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာကို ဂိမ်မာတွေက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့အခုလာမယ့် State Of Decay2မှာ အဲဒီလိုဂိမ်းတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ထွက်ဂရပ်ဖစ်နဲ့ ကျယ်ပြန့်ကြီးမားလှတဲ့ဂိမ်းလောကသစ်အတွင်းမှာ ဂိမ်မာများအားလုံးက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။
Microsoft Studios ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ State Of Decay2ဂိမ်းဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နွေဦးရာသီမှာ ထွက်ရှိလာမယ်လို့သိရပြီး ဂိမ်းဖန်တီးသူအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Undead Labs ဟာ ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထွေလာနှစ်ခုကို ၂၀၁၆ နဲ့ ၂၀၁၇ E3 ပွဲနှစ်ပွဲလုံးမှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်ဘီဂိမ်းကောင်းတွေကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ဂိမ်းပရိသတ်တွေဟာ နောက်လာမယ့် State Of Decay အခွေသစ်ရဲ့ နက်ရှိုင်းကျယ်ပြန့်လှတဲ့ဂိမ်းလောလ၊ ပိုမိုထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းလာတဲ့အသွင်ပြောင်းဇွန်ဘီတွေကြားမှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေနဲ့အတူ အသက်ရှင်သန်ရာလမ်းစကိုရှာဖွေဖို့အတွက် ဇွန်ဘီကမ္ဘာကြီးထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်ရောက်ချင်နေကြပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Microsoft Studios ကထုတ်လုပ်ပြီး Undead Labs ဂိမ်းအဖွဲ့ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ State Of Decay ဇွန်ဘီဂိမ်းဟာ ကျွန်တော်ဆော့ကစားခဲ့ဖူးသမျှ ဇွန်ဘီဂိမ်းတွေထဲမှာ လက်တွေ့အကျဆုံး၊ ယုတ္တိအတန်ဆုံး၊ ခံစားချက်ရသအပေးစွမ်းနိုင်ဆုံးနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးဂိမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရင်အခွေကိုတစ်ဦးတည်းသာဆော့ကစားနိုင်ပေမယ့် အခုလာမယ့် State Of Decay2မှာတော့ အွန်လိုင်းပေါ်ကကစားသမားများနဲ့ ချိတ်ဆက်ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်အပါအဝင်နောက်ထပ် ကစားသူသုံးယောက်အထိ စုစုပေါင်းလေးယောက် အတူတကွဆော့ကစားနိုင်ဦးမှာပါ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဟာ ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကကိုဂယက်ရိုက်စေမယ့် ဂိမ်းပေါင်းများစွာထွက်ရှိလာမယ့်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂိမ်မာတွေအတွက် ဝမ်းသာကျေနပ်စရာကြီးပါ။ အဲဒီလိုဂိမ်းတွေထဲမှာမှ State Of Decay2ဟာလည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ဂိမ်မာတော်တော်များများ မျှော်လင့်ထားတဲ့ဂိမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ရှိမယ့်ရက်ကိုအတိအကျမကြေညာသေးပေမယ့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာမယ်ဆိုတာ လုံးဝကိုသေချာနေတဲ့အတွက် ဘယ်ဂိမ်းကဘယ်အချိန်မှာထွက်လာမလဲဆိုတာကို ဂိမ်မာအားလုံးက ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်ဆိုင်းရုံပါပဲလို့ပြောရင်း State Of Decay2နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဂိမ်းတွင်း screenshot တွေနဲ့အတူ ဒီကနေပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
Ref: gamespot, outsidebox, wikia